မြန်မာ Live Show အကများ - အပိုင်း (၂)
WORLD AIDS DAY - ကြောက်စရာ AIDS ရောဂါ (၂)
ကြက်တူရွေး နှင့် မိန်းမကြီး
တိမ်တွေငို တဲ့ ကမ္ဘာ
Comics(3) ဘိုဘိုပါဝင်သော လက်အိတ်
ASK ME စားပွဲဝိုင်း (အမှတ် - ၆)
ဒီပို့စ်ကတော့ တကယ်ကို ကြာလှပြီ။ Long Overdue ပေါ့။ ဗမာတွေ အနောက်တိုင်းအကတွေ ကတဲ့ အကြောင်းပါ။ အပိုင်း(၁)မှာတော့ အကောင်းလေးတွေ တင်ထားတယ်။ အဲဒီပို့စ်လေးကို မေ့သွားပြီဆိုရင် ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်နော်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဝေဖန်ရေးပေါ့။ YouTube က ရွေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကတော့ နည်းနည်းဟောင်းနေလိမ့်မယ်။ ဗမာသီချင်းတွေနဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာ ကြာပြီဆိုတော့လဲ သည်းညည်းခံလိုက်ပါနော်။ ပေဖူးက အနောက်တိုင်းအကတွေကိုသာ လေ့လာနေတာ၊ ဗမာသီချင်းဆို ရှေးခေတ် သီချင်းကြီးတွေကိုမှ အသည်းစွဲလေ။ ကဲ.. စပြီ။
စိုင်းစိုင်းရဲ့ မသိသာ ဆိုးရွားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။ တော်တော်များများတော့ ကြိုက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဟွတ် အဟွတ်။ ပေဖူးကတော့ လုံးဝကို မကြိုက်ပါဘူး။ တစ်အချက် သီချင်းက copy။ နှစ်အချက် သီချင်းစာသား။ တို့ဗမာလူငယ်တွေ ရန်ကုန်တို့ မန္တလေးတို့လို မြို့ကြီးမှာ ဒီလိုပဲ ဟိုလေ ဒီလေဖြစ်နေတာ။ ဒါတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်းထဲမှာတော့ ထည့်မဆိုသင့်ဘူးပေါ့နော်။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင်ဆိုတာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ အရူးအမူးကြိုက်တဲ့ role model တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက စပြီး သီချင်းစာသားတွေကို အဲဒီလို ထည့်ဆိုတော့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေထဲမှာ သံမှိုရိုက်သွင်းသလို မဖြစ်နေဘူးလား။
နောက်ဆုံးတစ်ချက် နောက်က ကတဲ့ မိန်းကလေးတွေပါ။ ဒီနေရာမှာ ပေဖူးက လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းကို စည်းကမ်းကြီး ပိပြားနေလို့ အမြင်စောင်းနေတာလဲ မဟုတ်ဘူးနော်။ အရမ်းသိနေလို့ လူတတ်ကြီးလုပ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူနီးပါးမိန်းကလေးတွေကို မြင်ကြည့်တာပါ။ တချို့နေရာတွေမှာ ဗမာလိုတောင် ရေးလို့ မကောင်းတဲ့ ကကွက်တွေကို မြင်ရပါတယ်။
ဘယ်အကဆရာကများ ဒီလို ကကွက်တွေကို မိန်းကလေးတွေ ဗမာပြည်က စင်ပေါ်မှာ ကဖို့ သင်ပေးလိုက်တာလဲ။ ဒါဟာ pure hip hop and pop dance မဟုတ်ပါဘူး။ Choreography မဟုတ်ပါဘူး၊ Body Post တွေကို ဇွတ်ရှိုးသွားတာပါ။ Chorus အပိုဒ်တွေမှာ ကတဲ့ အကဟာ Stripper Dance တွေပါ။ မြင်တဲ့လူတွေ သိပါတယ်။ Did you see they even spank their own butt?? What the hell? ဒါခေတ်မီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်မပြုရသေးတဲ့ အပျိုလေးတွေပါ။ What are they doing?? အက, ကကော ကောင်းလား။ Stripper dance ဆိုရင်တောင် Professional မဟုတ်ပါဘူး။ Stripper Dance ဆိုတာ တိုင်တို့ ထိုင်ခုံတို့ကို အားပြုပြီးကမှ hot တာပါ။ ဒီလောက်တောင် ကချင်ရင်လဲ ရှေ့က microphone တိုင်ကိုသာ အားပြုပြီး pole dance ကလိုက်ပါတော့လား။ ဆက်ပြောရင် ဗမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါးစပ်က ထွက်လာတဲ့ စကားတွေ မကောင်းတော့ဘူး။ video ကိုသာ ကြည့်ပြီး လွန်လား မလွန်လားသာ ပြောပါတော့။ စိတ်မကောင်းစရာတွေ နောက်သီချင်းနှစ်ပုဒ် ကျန်သေးတယ်။ ဆက်လေ့လာသွားပါဦး။
ဒီ video ကတော့ live show မဟုတ်ပါဘူး။ Latin dance လား ဂေါက်ဂက်အကလား။ ကတဲ့ ပုံစံကိုက အချိုးမပြေတာလေ။ ပေဖူးသာ Director ဆိုရင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက ဒီအကမျိုးပေးကမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကသွားတဲ့ Timing ကို လိုက်ကြည့်ရင်တော့ mambo အကလို့ ထင်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုထားတာက သင်္ကြန်သီချင်း၊ ကသွားတော့ တောင်အမေရိကတိုက်မှာ အခြေခံတဲ့ Latin အက။ လုပ်သွားပုံက သင်္ကြန်အကမရှိတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကတာကိုကတော့ တော်တော်ကို အချိုးမပြေတာပါ။ ဘယ်သူကမှာတော့ မွေးကတည်းက ကတတ်မလဲနော်။ ဒါပေမဲ့ Latin အကဆိုတာမျိုးက VCD မရိုက်ခင် နှစ်ရက် သုံးရက်အလိုမှာ ကပ်သင်ပြီး တတ်တဲ့ အကမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းဆုံး နှစ်လ သုံးလလောက်သင်မှ ချောချောမောမော ထွက်လာမှာပေါ့။ အခုကတော့ တော်တော်အခြေအနေဆိုးပါတယ်။ ကကွက်တွေက မတိကျသလို Latin Dance ရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ Hip Actionတွေဆို လုံးဝမပါဘူး။ Typical Mambo ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ သိချင်ရင် ဒီမှာ video sample တစ်ခုကို link ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ သူလဲ professional မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကဖြစ်အောင် ကသွားတာပါ။ ပေဖူးပြောချင်တာက ကိုယ်မနိုင်ဘူးထင်ရင် မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။
ဒီတစ်ခုက ပိုဆိုးပါတယ်။ စိုင်းစိုင်း ထွင်တာ လွန်သွားတယ်လို့ ထင်ရတာပဲ။ ဒါမော်ဒယ်ဂဲတွေလား။ မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ အပေါ်ထပ်က ဟာတွေလား။ ကကွက်မရှိ စင်ပေါ်ကို တင်ချင်သလို တင်ပြီး လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်သွားကြတာပေါ့။ အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ ကတော့ စကားအဖြစ် ကျန်ရစ်တယ်နော်။ အဟိ။
ဒီသီချင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်က စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လင့်ခ်ပေးလို့ ကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ။ သူက အဲဒီရှိုးကို သူ့ကောင်မလေး ကြည့်ချင်လို့ လိုက်ပို့ရင်း ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တာကိုး။ high school တုန်းထဲက သူငယ်ချင်းဆိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ “He admitted that he enjoyed it.” ခေတ်တွေကတော့ တော်တော်မကောင်းတော့တာ။
ဒီပို့စ်ကို ရေးနေတုန်း libraryမှာ တောဂေါ်လီသီချင်းလင့်ခ် Embed လုပ်မလို့ ဖွင့်ထားမိတယ်။ အဲဒီမှာတင် စာအတူတူဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း American အဖြူတစ်ယောက်က ပေဖူးရဲ့ laptop ကို ကလိပြီး အဲဒီ link ကို playလိုက်တာ အဲဒီမှာတင် သောက်ရှက်ကို ကွဲရော။ He just asked, “What the hell are those girls doing on the stage?” တဲ့။ သူ့ကို Youtube က အပျိုတော်ယိမ်းတစ်ခါပြဖူးလို့ ကြိုက်ပြီး ပေဖူးကိုပါ ဗမာအက အတင်းကခိုင်းနေလို့ အ၀တ်အစားမရှိဘူးဆိုပြီး ရှောင်နေရတာပါ။ အမေရိကားက ဘိုတစ်ယောက်တောင် ဆင်ဆာဖြတ်ထားတာတွေ ကြည့်ပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့…….
ဒီတစ်ပါတ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်လိုက်တော့မယ်။ စာဖတ်သူတွေ အားလုံးလဲ ကြည့်ပြီး တော်တော်ရင်လေးသွားမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ပေဖူးဆီမှာ link တွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ ဆက်ပြီးပြောရင် ဒီထက်ဆိုးတာတွေပဲ ဖတ်ရ ရေးရမှာမို့ ဒီမှာတင်ပဲ ရပ်လိုက်တော့မယ်။
ရေးသားသူ PP at 10:31 PM 11 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Dancing, Myanmar Live Shows, အက
Special Post for WORLD AIDS DAY!
Wish everyone to be far away from AIDS.
ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ. မှာ ကျရောက်မယ့် ကမ္ဘာ. AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ. ကိုဦးတည်၍ ဒီအပတ်တော့ ကြောက်စရာ AIDS ရောဂါ အပိုင်း၂ ကိုဆက်ပါမယ်။။ အပိုင်း ၁ ကိုဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာ ကိုသွားပါ။
HIV ပိုးရဲ. Structure
HIV ပိုး မှာ HIV1 နဲ. HIV2 ဆိုပြီး ၂မျိုးရျိပါတယ်။ HIV ပိုးဟာ စက်ဝိုင်းပုံစံရှိပြီး သူ.မှာ Envelope ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်အလွှာ၊ Capsid ဆိုတဲ့ protein အလွှာ၊ Core ဆိုတဲ့ အတွင်းဆုံးက ရှည်မျောမျော လေးထောင့်လိုအကွက် ကလေးရှိပါတယ်။ Core ထဲမှာ Single Stranded RNA အမျှင်နှစ်ခုနဲ. Reverse Transcriptase ဆိုတဲ့ enzyme ပါတယ်။ Capsid ကိုကျတော့ p24 ဆိုတဲ့ gene နဲ.လုပ်ထားပါတယ်။ Envelope ပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိတဲ့ အချောင်းလေးတွေနဲ. အလုံးလေးတွေကတော့ GP-40 နဲ. GP-120 တို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။ GP-40 က အချောင်းတွေ ဖြစ်ပြီး GP-120 က အလုံးလေးတွေပါ။ HIV Virus က အင်မတန်သေးငယ်လှတဲ့အတွက် သူ.ကို သာမန် Microscope နဲ. မမြင်နိုင်ပါဘူး။ Electron microscope နဲ.ပဲမြင်နိုင်တယ်။
HIV ရောဂါပိုးဟာ သွေး၊ သုက်ရည်နဲ. မိန်းမအင်္ဂါကနေထွက်တဲ့ အရည်တွေထဲမှာ ပမာဏ များများ နေကြပါတယ်။ တံတွေး၊ မျက်ရည်၊ နို.ရည်၊ ကျဉ်ငယ် ရည်တွေ ထဲမှာလည်း ပမာဏ အနည်းငယ် ပါတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တံတွေးတို. မျက်ရည်တို.က နေ ရောဂါကူးတဲ့ နှုန်းက မကူးစက် သလောက် နည်းပါတယ်။ ကူးစက်တာလည်း မတွေ.ရပါဘူး။ AIDS ရောဂါ ကူးစက်ပုံ ကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။
-လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အဖော်များလေကူးစက်ဖို. ရာခိုင်နှုန်းပိုများလေ ဖြစ်ပါတယ်။
-တစ်ခြား လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေ(Syphilis, Gonorrhoea, Herpes) နဂိုကတည်းက ရှိနေတာက HIV ပိုးကူးစက်ဖို. အန္တရာယ်ပိုများစေပါတယ်။
-ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ HIV positive တွေဆီကလည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
-မသန်.ရှင်းတဲ့၊ ရောဂါပိုးပါတဲ့ သွေးသွင်းမိခြင်း
-မသန်.ရှင်းတဲ့၊ ပိုးသေချာမသတ်ထားတဲ့ အပ်၊ ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေကိုသုံးစွဲမိခြင်း (ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေ ရောဂါကူးစက်ခံရတာ ဒီအချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်)
-ဆေးသမားတွေ ရောဂါကူးကြရတာဟာလည်း ဒီ အပ်တွေကို မျှဝေသုံးကြလို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
-သွားတိုက်တံတွေ ၊ ဘလိတ်ဓားတွေ မျှဝေသုံးစွဲရင်လည်း ကူးနိုင်တာကိုလည်း သတိပြုပါ။
-အမေမှာရောဂါရှိရင် ၁၃% ကနေ ၄၀% အထိကလေးကို ကူးနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
-ကလေးမွေးနေတုန်း ဒါမှမဟုတ် နို.တိုက်ရင်းကနေ ကူးနိုင်ပါတယ်။
(ဒါပေမယ့် ချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်။ HIV ပိုးဟာ ဒီလိုနည်းတွေနဲ. ကူးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ကူးစက်ဖို. ဟာ တစ်ခြားရောဂါပိုးတွေလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ ဥပမာ Hepatitis B အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးဟာ ပိုးအကောင်ရေ နည်းနည်းလေးဝင်သွားတာနဲ. ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် HIV ပိုးဟာ ကူးစက်ပြီးရောဂါပေးဖို. ပိုးကောင်ရေအများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ထဲကိုပိုးကောင်ရေ အများအပြားဝင်သွားမှ ရောဂါပေးတာပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပိုးအရေအတွက် အောက် လျော့ဝင်သွားရင် ရောဂါမကူးဘူးလို.ဆိုရမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် HIV ပိုးဟာ လွယ်လွယ်နဲ. မကူးစက်နိုင်တဲ့ ပိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။)
ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
ကာကွယ်ဆေးကတော့ မပေါ်ပေါက်သေးပါဘူး။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ HIV ပိုးမှာပါတဲ့ gene တွေဟာ mutation (gene တွေ ပုံပြောင်းတာ)ဖြစ်တာမြန်ပါတယ်။ ဆေးတွေကလည်းပြောင်းတဲ့ gene ပေါ်လိုက်ပြီး မတီထွင်နိုင်တဲ့ အတွက် ကာကွယ်ဆေး ကိုအောင်မြင်အောင် မထုတ်နိုင် သေးတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင် ကနေ ကလေးဆီကို မကူးအောင် ကာကွယ် နိုင်တဲ့ ဆေးတွေတော့ရှိတယ်။ ၁၀၀%တော့ မကာကွယ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ၁၄ ပတ် ကိုယ်ဝန်ကနေ စပြီး မွေးတဲ့ အချိန်အထိ Zidovudine ဆိုတဲ့ ဆေးကို တစ်နေ.ကို 600mg သောက်ပေး ရပါမယ်။ မွေးနေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ဒီဆေး 2mg/kg ကို အကြောဆေးထိုးပေးရပါမယ်။ အဲဒီနောက် 1mg/kg ကို မမွေးမချင်း အချိန်အပိုင်းအခြား တစ်ခု ထားပြီး ထိုးပေးရပါမယ်။ မွေးလာတဲ့ ကလေးကိုလည်း ဆေးတွေ ထိုးရ၊ တိုက်ရဦးမှာပါ။ သိပ်တော့မလွယ်လှ တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ အမေရော ကလေးပါ ဆေးဒဏ်ခံရမှာပါ။ ဒီလိုသောက်ထားတာတောင်မှ ကလေးကို ကူးစက် နိုင်ခြေက ၉% ပဲလျော့တာပါ။ နောက်တစ်ခုက တီဗွီက ကြေညာတဲ့အတိုင်း ပြန်ပြောပါမယ်။ လိင်ကိစ္စကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင် ရပါမယ်။ မရှောင်နိုင်ရင် condom ကို စနစ်တကျသုံးပါ။ ကိုယ့်ရဲ. ဇနီး/ခင်ပွန်းကို သစ္စာရှိကြပါ။ အားလုံးပဲဒီအချက်တွေကို ရှောင်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု က HIV ပိုးရှိတဲ့လူမှာထိုးထားတဲ့ အပ်ကိုယ့်ကိုစူးမိတယ် ဆိုပါစို.၊ ဒီလိုဆို ကူးတော့မှာပေါ့၊ ဒါဆိုအတတ်နိုင်ဆုံး ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ ထိတဲ့နေရာကိုရေနဲ. ဆပ်ပြာနဲ.ေ သချာဆေးပါ။ နောက်ပြီးရင် ဆေးသောက်ရပါမယ်၊ Zidovudine ကို ၃ပတ် သောက်ရပါမယ်။ ဆေးကို ဖြစ်ဖြစ်ပြီးချင်း မြန်နိုင်သမျှ မြန်အောင် သောက်ရပါမယ်၊ နာရီဝက်ကနေ ၂ နာရီအတွင်းသောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါကို PEP ( Post Exposure Prophylaxis) လို.ခေါ်ပြီး ကူးစက်နိုင်ခြေ ၇၉% အထိလျော့ကျစေပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေ၊ အခြားသူတွေ အပ်စူးရင် ဒီနည်းကိုပဲ အရင်သုံးပါတယ်။ အပ်စူးတာ တစ်ခုကိုပဲသုံး တာမဟုတ်ဘူးနော်၊ အခြားကူးစက် နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေအနေ၊ အပြုအမူတွေကြုံလာရင်လည်း သုံးလို.ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးရဲ. Side effect ကလည်းမသေးဘူးနော။
ကုသတဲ့ဆေးတွေ တော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါပျောက်အောင်တော့ မကုနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါကို အခြေအနေ တစ်ခုမှာ တန်.နေအောင်ပဲ ထိန်းထား နိုင်တာပါ။ သုံးတဲ့ဆေးတွေကတော့ Zidovudine, Dideoxyinosine, Stavudine, Lamivudine, Abacavir တို.ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီဆေးအုပ်စု ကို Reverse Transcriptase Inhibitor လို.ခေါ်ပါတယ်။ HIV virus ရဲ. Core ထဲမှာရှိတဲ့ စောစောကပြောခဲ့တဲ့ Reverse Transcriptase enzyme ကို ဒီဆေးက ပိတ်ပေး မှာပါ။ နောက်ဆေးအုပ်စု တစ်ခုက HIV protease inhibitor လို.ခေါ်ပြီး Saquinavir, Ritonavir, Indinavir ဆိုတဲ့ဆေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ fusion inhibitor ဆိုပြီးပေါ်တာသိပ်မကြာသေးတဲ့ ဆေးကတော့ Enfuvirtide ဆိုတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ထိရောက်တယ် လို.တော့ ဆိုကြတာပဲ။
ဆေးတွေကို တစ်ခုချင်း သောက်တာ များလာတဲ့ အတွက်ဆေး တစ်ခုချင်း စီကို HIV ပိုးရဲ. ခံနိုင်ရည် တိုးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေး ၃ မျိုးပေါင်းထားတဲ့ HAART ( Highly Active Anti- Retroviral Theray) ဆိုတဲ့ ကုသနည်းကို လောလောဆယ် သုံးနေပါတယ်။ ဒီကုသနည်းနဲ.သာ အချိန်မှီ ကုသမယ်ဆိုရင် Virus အကောင်ရေ သန်းနဲ.ချီရှိနေရာကနေ အကောင် ၅၀ အောက် ကို ၈ပတ်အတွင်းကျသွားပြီး ၆လကြာရင် Virus ကိုတောင် ရှာလို.မရတော့တဲ့အထိ နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ နည်းနည်းလေးပဲ ကျန်မယ်လို. ပြောတာ။
ကုရင်လည်း ရောဂါပိုး ကျန်နေသေး တာပဲ၊ မကုပဲထားလိုက် လည်း မထူးပါဘူး၊ လို.တော့မထင်နဲ.။ မကုလို. ကတော့ အနှေးနဲ. အမြန် သေမှာပဲ။ ဒီဇယားလေး ကို ကြည့်၊ ဒါကုသမှု မခံယူတဲ့ လူနာမှာ ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ပုံ။ အပြာလိုင်း လေးက CD4+ cell တွေကိုပြပြီး အနီလိုင်းကတော့ viral load ကိုပြတာပါ။ ၆ ပတ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ CD4+ cell တွေ ကျသွားပြီး ၁၂ ပတ်လောက် အကြာမှာ နည်းနည်းစီ ပြန်တက် လာကြပါတယ်။ Viral Load လို.ခေါ်တဲ့ ပိုး အကောင်ရေက လည်း အစက လောက် မများပဲ ကျသွား လိုက်တာ ၁၂ပတ် အကြာမှာ ဟိုးအောက် ရောက်နေရော။ ဒီအခြေနေမှာ လူနာက အကောင်းကြီး ရှိသေးတယ်။ သူ.မှာ လက္ခဏာ မပေါ်သေးဘူး။ အဲဒီကနေ နောက် ၇နှစ် အထိ ရောဂါ လက္ခဏာဘာမှ မပြဘူး။ ဒီကြားထဲကအချိန် ကို အပိုင်း၁ မှာပြောခဲ့တဲ့ Window Period လို.ခေါ်တယ်။
ဒီ ၇နှစ် အတွင်းမှာ လက္ခဏာ မပေါ်ပေမယ့်၊ ပုံမှာ သတိထားမိလား? CD4+ cell ရေအတွက် တွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ထိုးဆင်းသွားတာကို။ ၇နှစ် နဲ. ၈ နှစ်ကြားမှာ Viral Load ပြန်တက်လာပြီး CD4+ ကတော့ ကျမြဲ ကျနေတဲ့ အတွက် အခြေအနေ သိပ် မကောင်းတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေစပြလာပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ Viral Load က ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း သိန်းနဲ. သန်းနဲ. ချီပြီး များလာပါတော့တယ်။ CD4+ ခမျာ ဘာမှတောင် ပြန်မလုပ်နိုင်၊ HIV က Immune System ဆိုတာရှိတယ် လို.တောင်မထင်ပဲ၊ သူထင်တိုင်းကြဲပါတော့တယ်။
၁၀နှစ်လောက် ကြာတော့ Oppotunistic Infection တွေဝင်လာရော။ AIDS ရောဂါ စစ်စစ် အခုမှ ဖြစ်တာလေ၊ Optunistic Infection ဆိုတာ ကျွန်တော် အပိုင်း-၁ မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို. ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ဘယ်နေရာမဆို ရောဂါပိုးမွှားတွေ ရှိနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို. ကိုယ်တိုင်ဒီပိုးမွှား တွေကို ရှုရှိုက်မိပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ. Immune System ရှိနေတဲ့အတွက် ကြောင့်မို.လို.ပါ။ အခုက Immune System က မရှိသလိုဖြစ်နေတော့ ဒီသာမန် ပိုးမွှားတွေက ၀င်ထွက်ပြီး ရောဂါပေးတော့တာပေါ့။
Opptnistic Infections ဆိုတာ bacteria ကြောင့်ဖြစ်တာပါတယ်၊ fungus ကြောင့်ဖြစ်တာပါတယ်။ အခုကျွန်တော် ကိုယ်ခန္ဓာ နေရာအနှံ.ဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတွေကို တန်းစီဖော်ပြသွားမယ်။
ဦးနှောက် မှာ Toxoplasma (ကြောင် မှာနေတဲ့ bacteria) ကြောင့် လေဖြတ်နိုင်တယ် ၊
Herpes (ရေယုန် Virus) ကြောင့် အမြင်အာရုံချို.ယွင်းမယ်၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်မယ်၊ တက်မယ်၊
Cryptococcus (ခိုမှာနေတဲ့ ကပ်ပါး) ကြောင့် စိတ်မမှန်ရောဂါဖြစ်နိုင်တယ်။
မျက်လုံးက Retinitis ဆိုတဲ့ မြင်လွှာရောင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဆုတ်မှာ Pneumocystic carinii ဆိုတဲ့ အကောင်ကြောင့် Pneumocystic Pneumonia
Atypical mycobacteria ကြောင့် Secondary TB ရောဂါတွေ ဖြစ်မယ်။ TB ဟာ AIDS ဖြစ်တဲ့ လူအားလုံးနီးပါးမှာ ပြန်ဖြစ်လာတာကိုတွေ.ရပါတယ်။
Herpes Virus ကြောင့် ရေယုန်ရောဂါ၊
HPV (Human Pappiloma Virus) ကြောင့် warts ဆိုတဲ့ ကြွက်နို.၊
Fungi ကြောင့် scabies ဆိုတဲ့ ၀ဲရောဂါ၊
Bacteria တစ်မျိုးကြောင့် Eczema ဆိုတဲ့ နှင်းခူဖြစ်မယ်၊
ပုံမှာပြထားသလို Kaposi Sarcoma ဆိုတဲ့ ညိုပြာပြာ အကွက်တွေဖြစ်မယ်၊ ဒါကင်ဆာတစ်မျိုးပဲ။ အရေပြားမှာသာမက အစာလမ်းကြောင်းတွေ၊ အဆုတ်တွေပေါ်မှာလည်း ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။
Amoeba ကြောင့် ၀မ်းတွေအရမ်းသွားမယ်၊
Giadia အကောင်ကြောင့် အစာစုပ်ယူမှုနည်းပါးမယ်၊
Salmonella ၊ Shigella ကြောင့် ၀မ်းပျက်မယ်၊ အစာမျိုရခက်မယ်၊
Candida ကြောင့် oral thrush ဆိုတဲ့ ခံတွင်းထဲမှာ အဖြူအဖတ်တွေပေါ်လာမယ်။
အသည်းရောင် အသားဝါ Hepatitis ဖြစ်မယ်။
HIV ရောဂါပိုးဟာ အရမ်းသေးလွန်းလှတဲ့ အတွက် ရောဂါရှိမရှိ သွေးစစ်တဲ့အခါ ပိုးကိုရှိမရှိ လိုက်ရှာဖို. မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာကိုစစ်သလဲဆိုရင် Antibodies (မြန်မာလိုဆို ပဋိပစ္စည်းလို.ခေါ်တယ်)။ အဲဒါကို သွေးထဲမှာ စစ်တယ်။ HIV Antibodies တွေ.ရင် HIV Positive လို.သတ်မှတ်ပါတယ်။ Antibody ကို နည်းနှစ်နည်းနဲ.စစ်လို.ရပါတယ်။ တစ်နည်းက ELISA ( Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နည်းက Western Blot ဆိုတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို antibody ကိုစစ်တဲ့ အခါမှာ ဥပမာ- လက်ကိုအပ်စူးပြီင်္းတာနဲ. ချက်ချင်းစစ်ရင် antibody မတွေ.နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ antibody မထွက်သေးဘဲ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ window period အချိန်ထဲကို ရောက်နေလို.ပါ။ Antibody ကရောဂါကူးစက်ပြီး ၃လ အကြာလောက်မှသွေးထဲမှာ စစ်လို.ရတာပါ။ ဒါကြောင့် ရောဂါကူးစက်ပြီးပြီးချင်း ရောဂါရှိမရှိ ချက်ချင်းမသိနိုင်ပါဘူး။
Anibody ကို အလွယ်နည်းနဲ.လည်းတချို.က စစ်ကြတယ်ဗျ။ အဲဒါကတော့ Test Kit နဲ.စစ်တာလေ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်တဲ့ အချောင်းလေးပုံစံမျိုးပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖြေကသိပ်ယုံလို.မရဘူး။ False positive, False negative တွေထွက်တတ်လို.ပါ။ ပြောချင်တာက Test Kit က အချိန်တိုအတွင်းမှာ အဖြေသိ နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကိုချည်း အဖြေမှန်လို. မယူဆသင့်ဘူးလို.ပြောတာပါ။
HIV ပိုးကို electron microscope နဲ.ရှာလို.တော့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းကိုသိပ်မသုံးကြပါဘူး။ research လုပ်ဖို.အတွက်လောက်ပဲ သုံးကြပါတယ်။ Immunoflorescence နည်းကိုလည်းသုံးပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေမှာ အသုံးများတဲ့ နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသော နည်းတွေ လည်ှးရှိပါသေးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တိုက်ဖျက်ရမယ့် ရောဂါတွေမှာ AIDS ကထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း ပပျောက်ဖို. လိုအပ်နေတဲ့ ရောဂါပါ။ AIDS ရောဂါခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေကိုလည်း ခင်မင်ကြည်ဖြူစွာ ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ. စိတ်ဓာတ်မကျအောင် ထိန်းထားနိုင်ဖို.လည်းလိုပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ဘယ်လောက် ကြာကြာ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ.စိတ်ဓာတ် ကြံ.ခိုင်မှု ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။
နိဂုံးအနေနဲ.ပြောရရင် HIV ပိုးဟာ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ကြောက်စရာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သေတာတောင် အသေလှလှမဟုတ်ဘဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေရမှာ။ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသဖို. ဆေးလည်း အခု အချိန်အထိ မရှိသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. အမြဲ မယုံကြည် ထားပါနဲ.။ အခန်.မသင့်ရင် ကိုယ်တောင် မသိလိုက်ပဲ ကူးသွားနိုင်လို.ပါ။ ဒါကြောင့် သတိထား နေထိုင်ဆင်ခြင် ကြဖို.လိုအပ်ပါတယ်…
ဒီအပတ်တော့ ဒီလောက်နဲ.ကျေနပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို.ထင်ပါတယ်။ နောက်အပတ်တွေမှာတော့ အပတ်စဉ် မှန်မှန် ရေးတော့မှာဖြစ်လို. စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု ပေးကြပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ ဒေါက်တာရမ်းကု at 8:20 PM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် AIDS, Health, Special, ကျန်းမာရေး
မ သေချာမှု့ ကလွဲရင် ငါ့ဘ၀မှာ
မ ရေရာမှု့ တွေ ချည်းပဲလို့ နားလည်တတ်ခဲ့တယ်...့ 
သြော် ... ဆီင်္ဇာရေ
မင်းအတွက် ဘရုတပ်စ် က တစ်ယောက်တည်းနော်.... . . .
ဗို့အားမပြည့်တဲ့ အလင်းနဲ့ ညတွေပဲ စုပုံ။
လက်ခုပ်နဲ့ ခပ်ယူလိုက်သော သမုဒ္ဒရာတောင်
နွေကန္တာခရောင်းလမ်း၊ ပန်းမခင်းထားလဲ
မှတ်ချက်... ကေသီပြောတဲ့ အားတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်... (အားလျော့သွားသလို ဖြစ်သွားရင် ဆောရီး :D )
ရေးသားသူ အိတာ at 1:12 PM6တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် Poem, ကဗျာ
တစ်နေ့သောအခါ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်သည် မိမိနေအိမ်သို့ ပြန်ရာ လမ်းခုလပ်တွင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ကို ဖြတ်ကျော်ရလေသည်။
ထိုဆိုင်သို့ ဖြတ်ကျော်နေစဉ်အတွင်း ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်သည် ထိုမိန်းမကြီးအား
(((( အင်မတန်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာဗျာ ))))
မိန်းမကြီးခမျာ ဒေါသထွက်ပြီး ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့ ဖြတ်ကျော်သွားလေသည်။
နောက်နေ့တစ်ခါ ထပ်မံဖြတ်ကျော်ရပြန်သည်။ ထုံးစံအတိုင်းပင် ကြက်တူရေး သည်
(((( ရုပ်ဆိုးလိုက်တဲ့ မိန်းမကြီးဗျာ ... ))))
ထိုမိန်းမကြီး အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်လေတော့သည်။ ထိုအခါ ထိုမိန်းမကြီးသည် ဆိုင်ရှင်အား အကြိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်မံပြောမည် ဆိုပါက ကြက်တူရွေးကိုလည်း သတ်ပစ်မည်။ ဆိုင်ရှင်ကိုလည်း တရားစွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ဆိုင်မှ ထွက်ခွာသွားလေသည်။
နောက်နေ့တွင် ထိုမိန်းမကြီး ဆိုင်ရှေ့မှ ဖြတ်ကျော်မည် အပြုတွင်
ကြက်တူရွေး က ။ ။ ဟိုအမကြီး
မိန်းမကြီး ။ ။ ဘာတုန်း
ကြက်တူရွေး ။ ။ ဟဲ... ဟဲ.. ခင်ဗျားကို ကျုပ်ဘာပြောမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိပြီးသားပါ ....
ရေးသားသူ Tea at 12:00 PM0တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ရိုးစင်းတဲ့ ရင်ခုန်သံ အောက်မှာ
မရိုးရှင်းတဲ့ ရင်ခုန်သံ ကို
ကျွန်းတစ်ခု အဖြစ် ဖန်းဆင်းခဲ့သူက
ငါ့ဘ၀ရဲ့ အချစ် နတ်ဘုရားတစ်ပါး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့
မင်းဝင်လို့ ခံစား ကြည့်စေချင်တယ်......
တကယ် ဆို အစွန့်ပစ်ခံ ပန်းတစ်ပွင့်မို့
စိုးရွံ့စွာ ရှက်နေမိတာ အမှန်ပါ......
ငါ့ကိုယ် ငါ အရွဲ့တိုက်လို့
ကမ္ဘာတစ်ခု ကို စွန့်ခွာခဲ့ပေမယ့်
ရေးသားသူ မေသူပိုင် at 3:27 PM2တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
ဒီ အပတ် ကာတွန်း နံပါတ်(၃) ကိုတော့ ဘိုဘို ကာတွန်းကို ယခင် နံပါတ်(၂) အပြီးမှာ လူအများ တောင်းဆိုချက် အရ တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ နောက် အပတ် ကျရင် ပြာဂလောင် ပြာလချောင် (သို့) ရွှေအိ ရွှေဘုတ် ကို တင်ဆက် ပေးပါမယ်။ မဲပေးပြီး ဆန္ဒ ပေး နိုင်ပါတယ်။ တင်စေချင်သော ကာတွန်း နာမည်ကို ပြောခဲ့ပါ။
နောက်အပတ်ကျရင် ပြာဂလောင် ပြာလချောင် (သို့) ရွှေအိ ရွှေဘုတ် ကို တင်ဆက် ပေးပါမယ်။ မဲပေးပြီး ဆန္ဒပေး နိုင်ပါတယ်။ တင်စေ ချင်သော ကာတွန်း နာမည်ကို ပြောခဲ့ပါ။
ရေးသားသူ Tea at 11:52 PM 10 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တစ်ခါက ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား မောင်းသူ တစ်ယောက်ဟာ ကားစီးလုံးပြည့် အဖွားအို တစ်သိုက်နဲ့ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးအတိုင်း မောင်းနှင်လာခဲ့ပါသတဲ့။ လမ်းခုလတ် တစ်နေရာ အရောက် နောက်ဖက်ခုံမှာ ထိုင်နေသူ ခပ်သေးသေး အဖွားအိုက သူ့ပုခုံးကို လက်တို့ပြီး "မောင်ရင်လေး မြေပဲ ကြိုက်တတ် လားကွယ့်" လို့ မေးလာပါတယ်။
ကားမောင်းသူကလဲ ရိုသေစွာ "ဟုတ်ကဲ့ အဖွား" လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ပါသတဲ့။
အဲ့ဒီနောက် သူ့ပုခုံးကို ကျော်ပြီး လက်တစ်ခုပ်အပြည့် မြေပဲတွေ လာပေးတာပေါ့။
ကားမောင်းသူမှာ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာစွာနဲ့ မြေပဲတွေကို စားလိုက်တယ်။
နောက် ၁၅မိနစ်လောက် အကြာမှာ သူ့ပုခုံးကို ကျော်ပြီး နောက်ထပ် မြေပဲ လက်တစ်ခုပ် ရောက်လာပြန်ရော။
အဖွားအိုက အဲ့ဒီနည်းအတိုင်း ၅ခါလောက် မြေပဲတွေ လာပေးနေလေသည်။ ကားမောင်းသူကလည်း အပြင်းပြေ မြေပဲလေး တမြုံ့မြုံ့နဲပေါ့။
နောက်တစ်ခါ သူ့ပုခုံးကို အဖွားအိုက လာတို့ ချိန်မှာတော့ မနေနိုင်ပဲ မေးမိပါသတဲ့။
"အဖွားခင်ဗျာ့၊ ၀ယ်လာတဲ့ မြေပဲတွေ ကိုယ့်ဘာသာ မစားပဲ ဘာကြောင့် ကျနော့်ကိုပဲ လာပေးနေတာလဲ ခင်ဗျာ" ဟု မေးလိုက်သည်။
"ဖွားဖွားတို့က မ၀ါးနိုင်ဘူးကွယ့် ဖွားဖွားတို့မှာ သွားမရှိဘူးလေ" ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
စဉ်းစားရ ကြပ်သွားတဲ့ ကားမောင်းသူကလဲ ထပ်ပြီး မေးပြန်လေသည်။
"မစားနိုင်ပဲနဲ့များ ဘာလို့ ၀ယ်ခဲ့ရသလဲ အဖွားရယ်" ဟူ၍ဖြစ်သည်။
"ဖွားဖွားတို့က မြေပဲအပြင်မှာ ၀န်းရံထားတဲ့ ချောကလက်တွေကိုပဲ ကြိုက်တာလေ" ဟူသတည်း ..
ရေးသားသူ Tea at 8:21 PM4တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
အခု ASK ME စားပွဲဝိုင်း ရဲ့ အမှတ် (၆) မှာ မေးခွန်း ၃ခုရဲ့ အဖြေကို ဖော်ပြသွားပါမယ်။ မေးခွန်း အသစ်တွေ ဆက်မေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာ ကို သွားပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ပညာရေး ဆိုင်ရာ မေးခွန်း
ထွန်းနိုင် ၏ မေးခွန်း
ဟုတ်ကဲ့။ အမေရိကန်ပညာရေး ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး မေးခွန်းလေး ပေါ်လာလို့မေးချင်တာပါ။ အမေရိကန်ပညာရေးနဲ့ မြန်မာပြည်က ပညာရေးနဲ့ဘာများ ကွာခြားပါသလဲ?
ဘာများကွာသလဲဆိုတော့ လက်ရှိ မြန်မာပြည်က ပညာရေးစနစ်က ရှေးဟောင်း အင်္ဂလိန် ပညာရေးစနစ်ကို အခြေခံ ထားပါတယ်။ လက်ရှိ အင်္ဂလန် စနစ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ မြန်မာပြည်က ပညာရေး အဆင့်တိုင်းမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ အားလုံးကို စာတွေကို အလွတ်ကျက်စေပါတယ်။ စာတွေအားလုံးကို သေချာ နားလည်ထားဖို့ထက် အများစုဟာ စာတွေကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပြီး စာမေးပွဲတွေကို ဖြေဆိုကြတယ်။ မေးလိုက်တဲ့ စာမေးပွဲတွေဟာလည်း အလွတ်ကျက်ထားလား မကျက်ထားလား မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့ဆရာ ဆရာမတွေဆိုရင် သခ်ျာမှာ အဆင့်လေး တစ်ဆင့် ကျန်ခဲ့လို့ အမှတ်မပေးတော့ တာမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ မရှိသင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ အရည်အချင်း အမှန်တကယ် ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို အဓိက မွေးထုတ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ အမေရိကန်ပညာရေးမှာ ကွာခြားနေပါတယ်။ အမေရိကန်ပညာရေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအရ ကျောင်းသား တွေ အားလုံးကို Curiosity ဆိုတဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေ၇န် ငယ်စဉ်ချိန်ခါကထဲက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ နင်တို့ လျှာမရှည်ကြနဲ့စမ်း ဆိုတဲ့ ဆရာတွေ ဆရာမတွေက တစ်ပုံတစ်ခေါင်းပါ။ ကျောင်းသားတွေကို စူးစမ်းစေလိုစိတ်ကို အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အရာရာကို မိမိဘာသာ သေချာ သုံးသပ်စေလိုတဲ့ စနစ်က လက်တွေ့ဘ၀မှာ အများကြီး အထောက် အကူဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေ စစ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း အလွတ်ကျက်ထားလား မကျက်ထားလားထက် ကျောင်းသား တစ်ယောက်က ဒီ သင်ခန်းစာအပေါ်မှာ ဘယ်အဆင့်ထိ နားလည် သဘောပေါက်သလဲ ဆိုတဲ့ နေရာကို အဓိက ထားပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ ရှိနေတော့ မြန်မာပြည်က စနစ်က လက်တွေ့ဘ၀မှာ ထိရောက်စေဖို့ ခက်ခဲ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဆေးပညာကို ၅နှစ်တိတိ ဖတ်ခဲ့ပြီးတော့ ယူရီးယားမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ရေရဲ့ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကို သေချာ မခွဲတတ်တဲ့ လူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေ အားလုံးက ကွာခြားချက် အနည်း အကျဉ်းပါ။ ဒီလို အားနည်းချက်တွေကို အောက်ခြေ အခြေခံစနစ်ကနေ သေသေချာချာ ပြုပြင် ဖွဲ့စည်းသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Anonymous ၏ မေးခွန်း
this's for ask me စားပွဲဝိုင်း, is brain drainaproblem for myanmar now?
ဒီမေးခွန်းက အရင်တစ်ခါက ကျွန်တော် ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေ (ASK ME - 5) ထဲမှာ လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ ပညာရေးကင်းမဲ့နေလို့ လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရယ်၊ ပြီးတော့ Brain Wash လုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မူတည်ပြီး မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ မြန်မာလို ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဦးနှောက်ဆေးခံရခြင်းပေါ့။ အခု လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေက တော်တော်ဆိုးနေပါတယ်။ စစ်အစိုးရက ပညာရေးစနစ်ကြီးကို ချိုးဖျက်ထားတော့ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေ မိမိကိုယ်ကို သေသေချာချာ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဘက်ဘက်ကနေ ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ ပညာရေး စနစ်အောက်မှာ အစစအရာရာ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နေရာပေါင်းစုံကနေ ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ Media (သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယို) တွေ ကြားမှာ Brain Wash လုပ်ခံရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ လွယ်ကူပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ကိစ္စမှန်သမျှကို စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်ဖို့ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ မေးခွန်းကို တိုက်ရိုက်ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဒီပြဿနာက များလှစွာသော ပြဿနာတွေ ကြားထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်က လျှောက်လှမ်းရမယ့် ခရီးရှည်ကြီးကို လျှောက်လှမ်းနေစဉ်မှာ ပြဿနာတွေ အများကြီး ကြုံလာမှာ အမှန်ပါ။ ဒီဟာတွေ ကြားထဲက ဒီလိုပြဿနာကလည်း အခြေခံကျတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုပါ။ နေရာတိုင်းမှာ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ မရှိတော့ ဒီလိုမျိုးပြဿနာက ပေါ်လာမှာ မလွဲမသွေပါ။ ဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ပညာရေးနဲ့ မီဒီယာနဲ့ ဖြေရှင်းမှသာ ထိရောက်မှု ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
tattlu ၏ မေးခွန်း
ကျွန်တော့်အိမ်ဝိုင်းတော်သားများ အားလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ။ ကျွန်တော်မသိတာလေးလည်း တစ်ခုမေးရဦးမယ်။ အင်တာနက်မှာ မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းတို့၊ မြန်မာစာ သဒါဆိုင်ရာတွေ လေ့လာဖို့ပြုစုပြီး တင်ထားတာလေး များရှိရင် အညွှန်းလေး တဆိတ်လောက် ဖြေကြားပေးပါဦးဗျ။
www.myanmarcupid.net ဖိုရမ်ကို အကြံပေးပါရစေ။ တခြား နေရာတွေမှာလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးလေ။ မြန်မာကရုဘစ်မှာတော့ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်တုန်းကလည်း ကရုဘစ်ကနေ တစ်ဆင့် သတ်ပုံကျမ်းတွေ လေ့လာဖူးပါတယ်။
ရေးသားသူ Tea at 3:01 AM5တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်
တူညီရာစာစဉ် ASK ME
ကျမ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ချစ်ခြင်းတိုင်းကို လေးစားလို့ အလေးထားခဲ့ ဖူးတယ် ။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ထိုင်ရှစ်ခိုးလို့ မကိုးကွယ်တတ်ပေမယ့် မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားနဲ့ ပေးအပ်လို့ သခင့်ထံမှာ သစ္စာတရား ရင်ဝယ်ပိုက် လို့ ပေးဆပ်ရင်း ကျေနပ်ခဲ့သူပါ။
ကော်ဖီတစ်ခွက်လို ခါးသက်သက် အရသာရှိတဲ့ ကျမဘ၀မှာ ရင်ခုန်စရာ သံစဉ်တွေကို အချိန်ပြည့် မဖန်တီး နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အနာဂတ် အိမ်မက် ခြေလှမ်းတွေကိုတော့ ပုံဖော်ရင်း သေချာခြင်တဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ မိခင်၊ အနာဂတ် ဇနီးလောင်း အဖြစ် ခါးသက်သက် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ကိုင်ရင်း ပုံဖော်နေခဲ့ တာ သခင် မသိခဲ့တာလား မ၇ှိခဲ့တာလား…. မာယာမပါတဲ့ ငါ့ချစ်ခြင်းမှာ ဂုဏ်ပကာသန တွေ မပါခဲ့တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အကြင်နာ ချစ်ခြင်း တွေကို နဲ့ ခစားခဲ့သူပါ။ မာန ကို တန်ဖိုး နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ဆိုတဲ့ နေရာ အတွက် လက်နက်လို့သာ သဘောထားရင်း သခင့် အပါးမှာ မာနတွေ မှေးမှိန် သွားပေမယ့် အချစ်တွေ မသေးသိမ်ခဲ့ တာ တော့ အမှန် ပါ သခင်……
ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်သူတွေဘဲ စခဲ့စခဲ့ကျမ အိမ်မက်ကမ္ဘာ ရင်ခုန်သံရွာကြီးကိုတော့ သခင်ဘဲ စခဲ့တာပါ။ ပုရွတ်ဆိတ်ပေါင်းမြောက်များစွာ၊ ခြင် ပေါင်း မြောက်များစွာကို ကျမ သတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမ ကို ပေးလိုက်တဲ့ တန်ပြန်မှုက သခင့်ကြောင့် မွေးဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေသာမက သခင်ကိုယ် တိုင် မွေးဖွားခဲ့တဲ့ သစ္စာတရား ကို ဂျော်နီဝါကာ တစ်ဝက်သောက်လို့ ရိုက်ချိုးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်….. ဂျော်နီဝါကာ ဆိုတဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် တုတ်ကောက်ကိုင်လို့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လူကြီးကိုဘဲ အပြစ်တင်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် ညနတ်မိမယ် လေးတွေနဲ့ ပျော်ပါး နေတဲ့ သခင့် မျက်နှာကြီးက သန်းရွှေ မျက်နှာကြီးနဲ့ တူလွန်းလှပါတယ် သခင်….
ခွေးမသောက်တဲ့ အရည်တွေကို သခင် သောက်တတ်မှန်းသိပေ မယ့် ခွေးတစ်ကောင်လိုသစ္စာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ဘဲ ယုံကြည်ခဲ့ မိတယ်..။ love is blind လို့ ဟိုလူကြီးက ပြောသွားပေမယ့် ကျမ ချစ်ခြင်းမှာ ပါဝါ ၁၅၀၀ပါတဲ့ မျက်မှန် တစ်လက်ရှိခဲ့တာ သခင်မသိခဲ့လေသလား။ အတိတ် ဘ၀ က သခင့် မဒီတွေနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့တာ သိပေမယ့်။ အတိတ် ကို အတိတ်မှာထားလို့ အနာဂတ်နဲ့ ယခုလက်ရှိအချိန်ကိုသာ ဦးတည်လို့ ခြေလှမ်းသစ်တွေ စတင်ခဲ့ပါတယ် သခင်….. တကယ်ဆို သခင် ရိုက်ချိုးခဲ့တာ သစ္စာတရား သာ မက နှစ်ဖတ်အသိုင်းဝိုင်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို Golden Gate တံတားပေါ်ကနေ သခင် ရူးနှမ်းနှမ်းနဲ့ ကန်ချပစ်ခဲ့တယ်…. အုတ်မြစ်တွေအသေချလို့ အိမ်မက်တွေကို ဖတ်တွယ် အနာဂတ်ကို မှန်းဆ လို့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကျမ ချစ်ခြင်းတွေက စူနာမိလှိုင်း ကြောင့်နဲ့လဲ မပါသွားသလို နာဂစ်နဲ့လဲမပျက်စီးခဲ့ပါဘဲ သခင်သောက်ခဲ့တဲ့ ဂျော်နီဝါကာနဲ့ မှ ပါသွားတာကြောင့် ရင်နာမိတာ အမှန်ဘဲ သခင်....
တကယ်ဆို သခင့်ကိုဘဲ စိတ်နာရ မလား ဂျော်နီဝါကာကိုဘဲ စိတ်နာရမလား ကျမ စိတ်တွေေ၀၀ါးဆဲပါ သခင်. အပြင်ထွက်လို့ ဂျော်နီဝါကာ ကြေငြာ ဆိုင်းဘုတ်တွေမြင်တိုင်း သခင့်ကို စိတ်နာသလို အဲဒီ ဆိုင်းဘုတ်ကိုဘဲ ခဲနဲ့ ထုပစ်ချင်ခဲ့ မိတာကြောင့် အခန်း အောင်းလို့ နေခဲ့မိတယ်… ဂျော်နီဝါကာသောက်လို့ ရူးနှမ်း နှမ်းလုပ်ရက်တွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့ သခင့်ကို အကြောင်းကို တွေးရင် သခင်လို ဘဲ လို ခပ်ဆင်ဆင် လူကြီး တွေကိုလည်း သတိရ လိုက်မိသေးတယ် သခင်။ သန်းရွှေ တစ်ယောက် ရူးနှမ်းနှမ်းတွေ လုပ်နေတာ ဘယ် သေနာတွေက ဂျော်နီဝါကာ လက်ဆောင်သွား ပေးမှန်းမှမသိတာ….
မောင်အေး စခဲ့တဲ့ ရုရှားမြန်မာ နူးကလီးယားပရောဂျက်ကြီးမှာလည်း ဗော်ဂါ နဲ့စခဲ့တယ်လို့ သတင်း သဲ့သဲ့ ကြားခဲ့ဖူးတယ် ဒါကို ဟိုသေနာကြီးက ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး ရေ ပါတာဘဲလိုချင်တယ်လို့ သွေးရူးသွေးတမ်း အော်ဟစ်နေသေးတယ်… ကျော်ဆန်းပြောတဲ့ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ တိုက်မယ်ဆိုတာ မီဒီယာ သမားတွေကိုလဲ အရက် တိုက်မယ်လို့ ပြောတာများလား.. ဒါဆိုလဲ သူတို့က ကျေအေးမှာပါ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အစည်းဝေး လုပ်တိုင်း နောက်ဆုံးတော့ ဒီမိုကရေစီစားပွဲပေါ်မှာ အရက်ပုလင်းခွံ၊ ဘီယာပုလင်ခွံတွေသာ ပွစာကျဲလို့ နိုင်ငံေ၇းသမား တစ်ချို့လဲ အရက်နာကျပြီး ဗိုက်ပူလာတယ်။ သြော်……. နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမား တစ်ချို့ ဗိုက်ပူပူနဲ့ ဘဲ ဆုတွေ တစ်ဆုပြီး တစ်ဆု ကိုယ်စားယူပေး နေကြတာပါလား လို့ သဘောပေါက်လိုက်တယ်။
ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲဝင် နေသူတွေ အစွန့်ရှည်ရှည်နဲ့ ရပ်တည်ဘို့ ပရိုပို ဆယ်လေး တင်လိုက် စတိတ်မန့်လေးတွေနဲ့ ချွေးသိပ်ရင်းနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်တောင် ကျော်နေပါပြီ သခင်… စတိတ်မန့် တွေ ပေါင်းချုပ်ထုတ်ပြီး ရောင်းစား ရင်တောင် Global Crise အတွက် Recover ဖြစ်မလားမသိ.. ဂျော်နီဝါကာရယ် ခင်ဗျားကို ဒင်းတို့တွေ အသည်းစွဲလို့ ကျမ အသည်းသာမက ကျမ တို့ တိုင်းသူပြည်သား တွေပါ အသည်းကွဲခဲ့ရ နေကြရပါပြီ ...
ဂျော်နီရေ ခင်ဗျားကြီးလမ်းလျှောက်နေသမျှ ကျုပ်တို့ အသည်းတွေကွဲနေရအုံးမှာပါ......
ps. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပျင်းခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေလို့ အော်ဟစ်ကြည့်တာလေ ။ ဆရာတီးကလည်း ပို့စ်မတင်တာ ကြာလို့ ဆဲလှပြီ
ရေးသားသူ မေသူပိုင် at 9:21 AM 13 တစ်ခုခုပြောခဲ့ရန်